को–को थिए ब्यालोन डी’ओरका दाबेदार ? - Deshko News Deshko News को–को थिए ब्यालोन डी’ओरका दाबेदार ? - Deshko News
को–को थिए ब्यालोन डी’ओरका दाबेदार ?
काठमाडौं, साउन ६ एजेन्सी
विश्व फुटबलकै प्रतिष्ठित व्यक्तिगत उपाधि ब्यालोन डी’ओर यस वर्ष नहुने भएसँगै त्यसलाई लिएर अनेक टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् । उपाधि दिने फ्रान्स फुटबलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारि गर्दै यस वर्ष उपाधि रद्द गरिने जनाएको हो ।
पछिल्लो दशक क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लिओनेल मेस्सीले वर्चस्व जमाउँदै आएको यस उपाधि सन् १९५६ यता पहिलो पटक रद्द भएको हो । आयोजकले उपाधि विजेता घोषणा गर्न आवश्यक रहेको आधारहरु न्यायोचित रुपमा पर्याप्त नरहेको बताउँदै रद्द गर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण केहि लिग रद्द हुँदा केहि लिग छोटो समयमा धेरै खेल गरेर समापन गरिएको छ ।
यस वर्ष उपाधि विजेता घोषणा नहुने भएपछि गतवर्षको विजेताले नै एक वर्षसम्म उक्त उपाधि राख्न पाउनेछन् । गतवर्ष बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सी उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी घोषित भएका थिए । अमेरिकाकी मेगन रापिनो उत्कृष्ट महिला खेलाडी बनेकी थिइन् । नेदरल्यान्ड तथा युभेन्टसका म्यथिस डे लिग्ट उत्कृष्ट युवा खेलाडी र लिभरपुल तथा ब्राजिलका एलिसन बेकर उत्कृष्ट गोलरक्षक भएका थिए ।
यस वर्ष पनि विगतझैं मेस्सी र रोनाल्डो उपाधिको लागि दावेदारमा थिए । यी दुईसँगै बायर्न म्युनिखका रोबर्ट लेवान्डोस्की र म्यानचेस्टर सिटीका केभिन डे ब्रुएनलाई प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिएको थियो । रियल म्याड्रिडका सर्जियो रामोस र करीम बेन्जेमा पनि दाबेदारका रुपमा अगाडी आएका थिए । हेरौं दाबेदार रहेका खेलाडीको प्रदर्शनः
मेस्सीका लागि व्यक्तिगत रुपमा यस सिजन पछिल्ला सिजनजस्तो रहन सकेन । बार्सिलोनालाई यस सिजन कुनै उपाधि दिलाउन नसकेका मेस्सीको अन्तिम आशा च्याम्पियन्स लिगमा टिकेको छ । उनले लिगमा २५ गोल गर्दै पिचिची ट्रफी जितेका थिए । सँगसँगै २१ असिस्ट प्रदान गर्दै लिग इतिहासमै सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन समेत गरे ।
सिजनको सुरुवातमा कमजोर प्रदर्शन गरेसँगै रोनाल्डोको करिअरबारे प्रश्न गर्ने धेरै थिए । कतिपयले रोनाल्डोको अवसान सुरु भएको लख समेत काटे । तर रोनाल्डोले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै सबै आलोचकको मुख थुने । कोरोनापछि लगातार गोल गर्दै आएका रोनाल्डोले लिगमा ३० गोल पार गरिसकेका छन् । अझै लिगका खेल बाँकी रहेकाले उनले युरोपेली गोल्डेन बुट समेत जित्ने सम्भावना छ ।
यसपटक उपाधिका सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रुपमा लेवान्डोस्की दरिएका थिए । बायर्न म्युनिखलाई जर्मन लिग उपाधि दिलाउन उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । उनले लिगमा ३४ गोल गर्दै कीर्तिमान समेत कायम गरे । च्याम्पियन्स लिगमा बायर्नले गरिरहेको प्रदर्शनलाई उनले फाइनलसम्म निरन्तर राख्न सके उनको उपाधि पक्काजस्तै थियो ।
केभीन डे ब्रुएन
म्यान्चेस्टर सिटीको मिडफिल्डमा गोल र असिस्ट निकालिरहेका बेल्जियन मिडफिल्डरले आफ्नो प्रदर्शनमा एकरुपता देखाइरहेका छन् । उनले प्रिमियर लिगमा १८ असिस्ट प्रदान गरिसकेका छन् । लिभरपुलले प्रिमियर लिग उपाधि जितेपनि उनलाई वर्ष खेलाडी बन्नबाट रोक्ने देखिंदैन । च्याम्पियन्स लिगमा सिटी अझै कायम रहेकाले पनि उनलाई दाबेदारको रुपमा हेरिएको हो ।
सर्जियो रामोस र करीम बेन्जेमा
रामोस र बेन्जेमाको जोडीले बार्सिलोनालाई स्तब्ध पार्दै ला लिगा उपाधि जित्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । बेन्जेमाले आक्रमणमा गोल र असिस्ट दिंदा रामोसले डिफेन्स सम्हाल्दै केहि गोल समेत गरे । कोरोनापछि लगातार ११ खेल अपराजित रहेको रियललाई यी दुईले उर्जा दिएर लिग उपाधिसम्म पुर्याए ।
यस्तो छ राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट
काठमाडौं, साउन २९ कतार विश्वकप २०२२ र एसियन कप २०२३ को छनोटको दोस्रो चरणको अन्तिम
पिएसजी च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा
पेरिस, साउन २९ फ्रान्सेली च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले खेलको अन्तिम समयमा २ गोल गरेपछि
भारतमा हकीका कप्तानसहित पाँच खेलाडीमा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, साउन २४ । भारतमा हकीका पाँच खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कप्तान
बङ्गलादेशका ११ खेलाडी कोरोनाबाट सङ्क्रमित
एजेन्सी, साउन २४बङ्गलादेशका ११ जना राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरिएको छ ।
काेराेनाकाे सन्त्रास: काठमाडौं प्रशासनले लगायाे नयाँ, के-के गर्न पाइदैन?
काठमाडौं, साउन ३१जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि कडाई गर्ने
ओली र प्रचण्डको वार्ता डोनाल्ड ट्रम्प र सी चिनफिङको जस्तो
गोरखा, साउन ३१नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वार्ता हुने भनेको डोनाल्ड
आज साउन ३१ गते शनिवारको राशिफल
मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) माया प्रेममा सामिप्यता बढेर